Binuʼaadankii Way Badbaadeen–Sheekadii Nuux iyo Daadkii | Farriinta Kitaabka
Daadkii Waa Laga Badbaaday
Ilaahay duni shar badan buu halaagay Nuux iyo reerkiisiina wuu badbaadiyay
BINUʼAADANKII markay bateen dembi iyo xumaan baa dunidii isla markiiba ku faaftay. Waqtigaas nebiga keliya oo jiray wuxuu ahaa Enoog. Dadkiina wuxuu uga digay inuu Ilaahay maalin kuwa aan cibaadada lahayn halaagi doono. Haddaba sharkii wuu sii socday wuuna ka sii daray. Malaaʼigaha qaarkood baa Ilaahay ka soo horjeedsaday oo ka soo tegay samada meeshoodii loogu talaggalay. Niman bay isku eekaysiiyeen oo si iimaandarran bay naago u guursadeen. Guurarkaas aan caadiga ahayn waxay sababeen dhalashadii farcan waaweyn oo xoog badan. Farcankaas dadkay cadaadiyeen oo waxay sii badiyeen dulmiga iyo dhiig daadashada dunida jirtay. Ilaahay aad iyo aad buu uga caloolxumaaday siday duniduu abuuray u hallaabtay.
Enoog dhimashadiisii kaddib hal nin oo ka duwan dunida sharkeeda baa jiray. Nuux baa la oran jiray. Reerkiisa iyo isagaba waxay sameyn jireen Ilaahay wuxuu raalli ka ahaa. Ilaahay markuu goʼaan gaaray inuu dadka sharka leh baabbiʼiyo wuxuu doonayay inuu Nuux iyo xayawaanka dhowro. Sidaas daraaddeed Ilaahay wuxuu Nuux u sheegay inuu doonni weyn oo afargees ah dhiso. Nuux, reerkiisa iyo xayawaankaba markabkan aawadiis bay uga badbaadi kareen daadka soo socdo. Nuux Ilaahay wuu dhegeystay oo muddo leʼeg 40 ilaa 50 sano buu doonnidii dhisayay. Waqtigaas Nuux “wuxuu ahaa mid xaqnimada wax ku wacdiya.” (2 Butros 2:5) Dadkii digniin buu ka siiyay daadka soo socda haddaba way iska dhegatireen. Kolkaas waxaa yimid waqtigii ay Nuux, reerkiisii iyo xayawaankii doonnidii wada geli lahaayeen. Ilaahay albaabkii wuu ka daba xiray oo roobkii baa daʼay.
Roob xoog leh baa 40 maalmood iyo 40 habeen daʼay oo biyuhu dhulka oo dhan bay qariyeen. Kuwa sharka leh way baabbaʼeen. Bilo kaddib markay biyihii yaraadeen doonnidii buur bay fadhisatay. Sanad dhan marka laga soo wareegay kuwii doonnidii ku jiray si nabad ah bay bannaanka ugu soo baxeen. Nuux allabari buu Yehowah ugu mahadceliyay. Ilaahay Nuux iyo reerkiisiiba wuxuu u ballanqaaday inuunan dib dambe daad waxa dunida ku nool ku baabbiʼinayn. Yehowah qaanso roobaad buu ku calaamadeeyay axdigan qalbi qaboojiska leh uu ballanqaaday.
Daadka kaddib Ilaahay binuʼaadanka amarro cusub buu siiyay. Wuxuu u fasaxay inay cunaan hilibka xayawaanka. Haddaba wuxuu mamnuucay cunidda dhiigga. Wuxuuna amray inay dhasha Nuux dunida oo dhan ku fidaan haddaba qaar ka mid ah way diideen. Dadku waxay ku midoobeen hoggaamiye Nimrod la yiraahdo oo waxay bilaabeen inay dhisaan munaarad dheer. Sartaas dheer waxay ku dhisayeen magaalada Baabel oo kaddib loogu yeeray Baabuloon. Ulajeeddadooda waxay ahayd inay khilaafaan amarka Ilaahay oo aysan dunida ku fidin. Haddaba Ilaahay baa horjoogsaday oo luqaddoodii qasay. Waxayna bilaabeen inay luqado kala duwan ku hadlaan. Intay is fahmi waayeen bay dhismadoodii joojiyeen oo dunida ku kala firdheen.
—Casharkan wuxuu ku saabsan yahay Bilowgii qaybaha 6 ilaa 11; Yuudas 14, 15.
Sharka sidee buu ugu faafay dunida?
Sidee buu Nuux u muujiyay inuu nin aammin ah ahaa?
Daadkii kaddib Ilaahay muxuu binuʼaadanka ka mamnuucay?
LA SOCOSHADA ILAAHAY
Dhashii Aadan iyo Xaawa badnaantood Yehowah xukunkiisii way ka soo horjeedsadeen. Laakiin qaar baa xukunka Ilaahay raacay oo kii ugu horreeyay wuxuu ahaa Haabiil Aadan iyo Xaawa wiilkoodii aamminka ahaa. Kaddibna Enoog iyo Nuux Ilaahay bay la socdeen. Waxay raaceen waddo Ilaahay ka farxisa. (Bilowgii 5:22; 6:9) Inta badan Kitaabku wuxuu ka hadlaa niman iyo naago sidaas oo kale Ilaahay xukunkiisa doortay.
Wadaag Wadaag Daadkii Waa Laga Badbaaday